Ciidamada maamulka Bashaar Al Assad ee dalka suuriya oo la wareegay magaalada Qusayr | Salaan Media
Ciidamada maamulka Bashaar Al Assad ee dalka suuriya oo la wareegay magaalada Qusayr
Ciidamada taabacsan maamulka Bashaar Al Assad iyo ciidamo ka socda jabhada Xisbu-ALLAH ee ka dhaqdhaqaaqa wadanka Lubnaan ayaa dagaal xoogan todobaadyadii lasoo dhaafay kula jiray mucaaradka dalkaas suuriya; dagaalkaasoo malmahii igu dambeeyey si aad u xoogan ka socday magaalada Qusayr oo xadka Suuriya iyo Lubnaan u dhow.
Maamulka Bashaar Al Assad ayaa ku dhawaaqay arbacdii inuu gabi ahaanba la wareegay magaalada Qusayr isagoo shaaciyey in uu khasaare aad u daran gaadhsiiyey ciidamadii kacdoonka ee ka soo horjeeday mamuulka Bashar Al Assad.
Dhanka kalena Mucaaradka Dalka Suuriya ayaa iyaguna qirtay in ay guul daro ay kasoo wajahday farantii ay ka dagaalamayeen ee magaladaas Qusayr waxaaney kamuujiyeen walaac in uu xasuuq lala beegsanayo shicibka iyo dagaalyahandii laga adkaaday lala beegsado.
Dhinaca dalka Lubnaan waxaa laga dareemayey faraxad iyo damaashaad tuulooyinka ay ku badanyihiin dadka madhabka Shiiciga ah aaminsan iyaga oo tageersan Maamulka Bashar Al Assad iyo Jabhada Xisbu-ALLAH oo isku dhan ah oo dagaal kula jira Mucaaradka dalka Suuriya oo u badan dadka ahlu Sunnadda ah.
Wararkan waxay imanayaan kadib mar baadhitaano lagu sameeyey wadanka Britain iyo wanadka Fransiiska oo muujinayey in isticmaalka hubka kiimikada ah uu ka dhacay dagaalka ka socoda wadankaas Suuriya iyo warar sheegaya in labad dhinac ee ka dagaalamaya dalkaasi ay isticmaaleen hubka noocan ah.
Dalka Suuriya ayaa labadii sano ee ugu dambaysay dagaal sokeeyey ka socday kasoo sababay ugu yaraan ilaa iyo 80 kun oo dhimasho ah iyo ilaa 1 malyuun oo barakacyaal ah. Magaalad Qusayr ayaa ahady magaalo istratiijik ah iyada oo ahayd marin dhinaca hubka iyo saadka u soo mari jiray ciidamada mucaradka wadankaasi Suuriya.